DAAWO: Puntland oo ku dhawaaqday in Somaliland & Shabaab wada socdaa ay duulaan kusoo qaadayaan gobalka Sanaag
BADHAN(P-TIMES) – Puntland ayaa ku dhawaaqday in uu jiro abaabul dagaal oo ay wadajir u wadaan Somaliland iyo Al- SHabaab oo ku wajahan gobalka Sanaag, gaar ahaana magaalooyin ka mid tahay magaalada Badhan ee xarunta hadda u ah gobalkaas ee ay gacanta ku hayaan ciidamada Puntland.
Taliyaha guud ee ciidamada Daraawiishta Puntland Sareeye Gaas Yaasiin Cumar Dheere oo booqanayey maalmihii u dambeeyey saldhigyada ciidamada Puntland ee kuyaala gobalka Sanaag, ayaa sheegay in ay hayaan xogaha cadeynaya duulaan wadajir ah oo ay labadaas dhinacba soo wadaan.
Taliyaha ayaa sheegay in Iskaashi wanaagsan uu ka dhaxeeya Shabaab iyo Somaliland, mana uusan sheegin cadeymo rasmi ah, marka laga reebo eedaha uu jeediyey oo ku aadan in ay leeyihiin wada shaqeyn joogto ah.
Taliyaha ayaa sheegay in Somaliland duulaankeeda uu yahay mid ay doonayso in ay ku qabsato magaalada Badhan, oo uu sheegay in ay tahay Caasumada 2aad ee Puntland, loogana baahan yahay ciidamadu in ay si adag u difacaan.
Sareeye Gaas Cumar Dheere ayaa cadeeyey in ay ka go`an tahay taliska ciidamada difaaca Puntland in ay sugaan amniga xaduudaha Puntland, wuxuuna sheegay in ay talaabadaas isla qaaten madaxda ugu sareysa ee maamulka, isagoo sheegay in ay dhammaan booqan doonaan meelaha ay kusugan yihiin ciidamadu.
Taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa kormeero kala duwan ku tagay saldhigyada ciidamada, isagoo la kulmay Taliyayaasha oo ay ka wada hadleen difaaca gobalka iyo sidii looga hortagi lahaa talaabo kasta oo ka timaada dhinaca Somaliland.
Ka sokow sheegida warkan ee Puntland, ma jirto wax kasoo baxay dhinaca Somaliland, balse mudooyinkii u dambeeyey ciidamo iyo xubno katirsanaa Somaliland oo kusugnaa magaalada Badhan ayaa isku dhiibay Puntland oo dhinacaas ku biiray, waxaana ku jira ciidamo gaaraya ku dhawaad 1300 Askari iyo masuuliyiin maamul.